Mormii guyyoota lamaaf Oromiyaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 27 ajjeefamaniiru - BBC News Afaan Oromoo
Mormii guyyoota lamaaf Oromiyaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 27 ajjeefamaniiru
24 Onkololeessa 2019
Hiriira aggaammii Jawaar Mohaammadirratti taasifame mormuun hiriira Oromiyaa bakka adda addaatti ba'ameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 26 qaqqabeera.
Dirree Dhawaatti kaleessaafi ar'a namoonni shan akka du'an Daarekterri Medikaalaa Hospitaala Dil-Corraa Dr. Abduraahimaan BBC Afaan Oromootti himaniiru.
Namoota kaleessa Ambootti ajjeefaman sadiin alattis warreen rasaasaan dha'amanii madaa'an keessaa maanguddoo waggaa 80 dabalatee namoonni lama lubbuun darbuu hoji-gaggeessaan Hospitaala Amboo Obbo Dabbabaa Faxxanaa ibsaniiru.
Waajira Kominikeeshinii Harargee Bahaatti Dursaa Garee Keenniinsa Odeeffannoofi Ummataa Obbo Ayyalaa Dheeressaa akka waliigalaatti hiriira mormii guyyaa lamaa godina sana keessatti gaggeeffameen namoonni sagal ajjeefamaniiru.
Magaalota hunda godinicha keessa jiran keessatti hiriirri akka ture himuun magaalota lamaan keessatti lubbuun darbeen ala nagumaan xumurameera jedha qondaalli mootummaa kun.
'Obsuun gowwummaa miti, kabajas nama dhowwachiisuu hin malu'
'Kun dogoggora cimaa ta'uu hin qabne garuu raawwatamedha'
Waa'ee dhimma eegdoota Jawaar hanga ammaa maal beekna?
Kanneen keessaa Gooroo Guutuutti kan ajjeefaman namoota shan yommuu ta'an ka'umsi ajjeechaa bakka kanatti uumamees jiraattota gidduutti malee qaama nageenyaatiin miti jedha Obbo Ayyalaan.
Jalqabarratti abbaan qabeenyaa tokko namoota lamatti dhukaasee yeroo ajjeesu, boodarra garuu namichis ofiisaafi maatiisaa keessaa dabalatee namoonni sadii ajjeefamaniiru.
Hammaaressaatti ammoo namni tokko ajjeefamuus himaniiru.
Hiriirri Gooroo Guutuu ture sun qaamonni hin beekamne keessa seenanii walitti bu'insa saba gidduutti ta'etti deebisuuf yaalii taasisaniin ummanni garuu irratti dammaquun of tasgabbeessun to'ateera.
Yaaliin hiriira ture sana keessa qaamonni hin beekamne kun lo'anii seenuun gara walitti bu'insa sabootaa gidduutti deebisuuf yaalan hirmaannaa Qeerrootiin gara kaayyoo bahameefiitti akka deebiyu taasifamee tasgabbiin uumameera jedhe Obbo Ayyalaan.
'Hiriira mormii Oromiyaarratti lubbun namaa darbeera'
Magaalaawwan gara garaatti namoonni 6 ajjeefamanii, konkolaataan 15 gubate
Guyyaa kaleessaa magaalaa Hararittis namoonni sadii akka ajjeefaman odeeffannoo qabaachuu dubbateera Obbo Ayyalaan.
Hiriiruma mormii guyyoota lamaan kana keessa tureen magaalaa Dodolaatti namoonni ja'a, Ambootti sadii, Adaamaatti ammoo lama ajjeefamuun gabaafameera.
Jawaar Mohaamad: 'Namni tokkoofi lama yaada isaa namarratti fe'uun hin danda'amu'
Obbo Shimallis Abdiisaa: 'Kun dogoggora cimaadha; kan ta'uu hin qabne garuu raawwatamedha'
23 Onkololeessa 2019
Hiriira Oromiyaa: Magaalota Oromiyaa keessatti hiriirri mormii itti fufeera
Hiriira mormii har'aam magaalaawwan gara garaatti namoonni 6 ajjeefamanii, konkolaataan 15 gubate
Gaazaan maaliif 'Google Maps' gubbaa qulqullinaan hin mul'attu?